MUSE Boka Inowana Audio Edhi Audacity: Mhedzisiro | Linux Vakapindwa muropa
Audacity ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa edhiyo edhita munyika yemahara uye yakavhurwa sosi, pamwe nekuve imwe yeakakurumbira paLinux. Huye, iyo kambani MUSE Boka, iyo yatove iine yavo mimhanzi notation software MuseScore uye iyo yekupedzisira Gitare nharaunda, yazivisa kuwanikwa kwe Audacity, kuenderera mberi kuzvisimbisa pachayo munyika yepachena odhiyo software.
Shanduko iyi yakaonekwa pawebhusaiti yepamutemo yeMUSE Boka, asi hapana kana chiratidzo chenhau muchirongwa cheAudacity chepamutemo. Chero nzira, chinhu chakakosha ndechekuti kutora kunotora kuti muridzi weAudacity ikozvino apfuure kune iri boka, asi chirongwa ichi chinoramba chakasununguka uye chemahara, saka vashandisi vako nenharaunda havana chavanotya.
Ultimate Guitar yaizovewo chikamu cheboka iri nenzira imwecheteyo, sezvo chikuva ichi chaizovambwa muna 1998 na Eugene Naidenov, uye yakawana MuseScore muna 2017 uye yaizoenderera ichitungamira iyo MUSE Boka kambani. Naizvozvo, iyi imwe fambiro nyowani ndeyekufambira mberi kwechisimba kuenderera nekushanduka sekambani uye kuve wakazara zvakanyanya maererano nemhinduro dzavanogona kupa.
Chinangwa ndechekuenderera mberi nekuvandudza mhinduro dze nyanzvi uye nyanzvi dzekuimba. Uye zvakare, iro boka richaunzawo zvinhu zvakanaka kune iyo Audacity chirongwa chaicho, sezvo Naidenov akazivisa zvirongwa zvekushingairira kupa muchirongwa, kuhaya vanogadzira uye vakuru vagadziri kuti vabatsire. Uye, zvinoita sekunge shanduko dzeramangwana dzinozoitirwa kunatsiridza chimiro pasina kukanganisa UX (ruzivo rwevashandisi).
Tichafanirwa kumirira kana iyo shanduro dzemberi kubva Audacity vane shanduko huru kune yavo graphical mushandisi interface. Chinhu chisingave chakaipa kusimudzira zvishoma. Kwechinguva, iwe unogona kuenderera uchinakirwa yazvino vhezheni iwe yaunogona kurodha pasi kubva kune yako nzvimbo yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » MUSE Boka Inowana Audio Edhiyo Audacity
kuvhuraSUSE Leap 15.3: RC yakaburitswa kuyedzwa izvozvi
Zellij: nyowani yekupedzisira multiplexer yakanyorwa muRust